Bhokisi Kuvaka & Mechnical Assembly - Pandawill Technology Co, Ltd
Pamusoro pekudhinda wedunhu bhodhi gungano (PCBA), isu tinopa bhokisi kuvaka gungano rekubatanidza kwema-sub-masystem uye ma module pamwe nekuzara kwechigadzirwa kusangana. Kuburikidza netiweki yedu yevanoda vatengesi, isu, kukambani yeAsteelflash EMS, tinokutsigira kubva kuA kusvika kuZ, kubva pakutaurwa kusvika padanho rekugadzira rakakura reprojekiti yako.
Ese masevhisi ari pasi pedenga rimwe, zvikwata zviri pachigadzirwa chechigadzirwa chako, zvinhu zvakakosha zvekupinda mumisika zvakanamatira.
Kuenda kupfuura PCBA, isu tinopa bhokisi kuvaka kusangana uye gungano nekumisikidza vatengi yakatsaurirwa gungano mitsara.
Takatarisa pakuramba uchienderera mberi, tinozvipira kugara tichigadzirisa nekugadzirisa gungano, zvichiita kuti ribudirire kune vatengi vedu uye nekudaro rinokwikwidza mumisika yavo. Nebasa redu repamusoro-soro rekugadzira zvemagetsi, nzvimbo dzakazvipira dzekugadzira uye zvikwata, zvakadzidziswa kuita kugona kuita bhokisi rekuvaka musangano padanho repamusoro remhando, tinozvipira kukutsigira iwe kukura nekusimbisa chinzvimbo chako pamusika wako, sekuwedzera kwechikwata chako .
Sekambani yemagetsi inogadzira kambani, tinovavarira kuunza mutengi wedu kugona.
Isu tinotenda muchikwata uye nzira yekudyidzana, kutsigira chigadzirwa chako padanho rekugadzira asiwo pakupera kwehupenyu hwechigadzirwa chako, kushanda kuunza chizvarwa chitsva kuhupenyu. Asteelflash, wako weElectroni Manufacturing Services (EMS) mudiwa weinjiniya uye yekugadzira masevhisi, kubva A kusvika Z.
Magetsi ekugadzira mhinduro muBhokisi Kuvaka:
• Complex electro-mechanical musangano
• Kufanana Kwekupfeka
• Inoshanda kuyedza